DNS iseva ayiphenduli. Yini okumelwe uyenze? I izixazululo elula kanye namathiphu
Mhlawumbe akufanele bathi abalandeli abaningi-Inthanethi kaningi ubhekene nesimo lapho uma uzama ukuxhumeka noma ukufinyelela esizindeni, uhlelo libike ukuthi iseva DNS ayiphenduli. Yini okumelwe uyenze? "Vindovs" 8, 7 noma 10, thatha njengesibonelo, ngoba inkinga enjalo kwenzeka kulezi zinhlelo. Futhi ngaphambi kokuba uhlanganise ekulungiseni lesi simo, cabangela ezinye izingqinamba theory.
Kuyini iseva DNS , futhi kungani sasidingeka?
Ngakho, liyini iseva DNS? Uma sikhuluma, ngomqondo ongokomfanekiso, ulimi lwabantu ngokuyisimangaliso elula, lokhu kusho izicelo ilungile futhi ukhululekile eqondisa kabusha kusuka ku-IP amakheli domain.
Ngokuyisisekelo ngoba kuvela ukuthi uma uvakashela ikhasi umsebenzisi Inthanethi kwiseva, equkethe yayo futhi has IP-ikheli, hhayi ngokufaka inhlanganisela ethile izinombolo, kodwa ngokufaka ikheli e elifunyenwe. Lena injongo eyinhloko lolu hlobo amaseva. Banjengemafu otolika izicelo.
Kodwa kwenzekani uma iseva DNS ayiphenduli? Yini okumelwe uyenze? 7, 8 no-10-th inguqulo ye-Windows, njengoba umthetho, amathuluzi ngokuzenzakalela awanikeli isihlangu sokuzivikela. Noma kunjalo, into namanje kungenziwa.
DNS iseva ayiphenduli. Yini okumelwe uyenze? izinkinga ezingase zibe khona
Ngakho, yini inkinga? Okokuqala, sinake inkinga ukuthi iseva DNS ayiphenduli (ukuthi benzeni kuzoxoxwa kamuva), futhi azikwazi ukuncika izilungiselelo ikhompyutha yomsebenzisi. Ngempela, uma kuvela isimo esinjalo, kungaba kuhle kakhulu ukuthi ezinye izinkinga zibe phezu ingxenye umhlinzeki. Ngakho-ke, into yokuqala okumelwe uyenze ukubiza futhi uthole ukuthi yini catch langempela.
Nokho, lolu hlobo kwenzeka ukuthi abasebenzisi, kungakhathaliseki ngokusebenzisa ukungazi, noma ngephutha, wena ushintsha nemingcele eziyisisekelo uxhumano. Ngaphezu kwalokho, ezinye izinhlelo for ukusebenza efanele kudinga ukufinyelela ku-intanethi ungakwazi ukushintsha ukucushwa angesabi. Kungokufanayo ngenhlanhla osebenza ku uhlobo oluthile amagciwane.
Kungenjalo, ungabheka ohlelweni igciwane Enani noma ngisho ukubuyela emuva esimweni sangaphambilini lapho yonke into ihamba. Kodwa, njengoba umkhuba imibukiso, ithemba akwanele, nakuba kwezinye izimo kuyasiza.
DNS iseva ayiphenduli. Yini okufanele ukwenze ukuze "windose" 7 nangaphezulu? ukuhlola System namathuluzi
Okokuqala kufanele sinake (, yezintambo noma engenantambo, ngaphandle umehluko) esakhelwe-Windows amathuluzi ukuqinisekisa ukusebenza uxhumano.
Kuthreyi yesistimu, ungabona isithonjana se-intanethi, futhi uma ukwenza ukuchofoza ngakwesokudla, imenyu livela lapho ungakhetha ukwahlukanisa ukuxilonga izinkinga. Umkhankaso "Master" uzohlola ngezinyathelo ezimbalwa, ubuyekeza njalo, uma inkinga eye yanyamalala. Kodwa njengoba umthetho, isheke enjalo, maye, lutho. Ngakho-ke, isenzo kuyodingeka ngokwakho.
Hlola iklayenti le-DNS umsebenzi
Esinye sezizathu kungenzeka uma DNS iseva ayiphenduli (ukuba ingabe manje ahlaziye), ochwepheshe abaningi musa bathambekele ukubiza isethaphu, futhi isimo iklayenti le-DNS. into yayo sidinga ukuhlola.
Ukuze wenze lokhu, udinga ukufaka noma abaphathi Computer nge imenyu ngokuchofoza ngakwesokudla isithonjana, noma sebenzisa services.msc, ngoba ukufinyelela ngqo uhlu lwemisebenzi. Kube uzodinga ukuthola ingxenye ezifanele (DNS-iklayenti).
Chofoza imenyu libizwa nge umucu izakhiwo, okuyinto kufanele sinake ukumisa uhlobo uqalisa. Kumele-othomathiki. Uma ipharamitha okunye, bamane udinga ukushintsha, khona-ke kuyinto efiselekayo kabusha uhlelo. Phela, lo izakhiwo isevisi lungatholakala ku chofoza kabili-evamile igama layo.
Manje bheka, ungesinye isibonelo somuntu nenkinga uma iseva DNS ayiphenduli. Yini okumelwe uyenze? "Rostelecom", isibonelo, ukumisa ukufinyelela inikeza amagugu ayo kanye nemingcele, kodwa abahlinzeki kakhulu ukusebenzisa uhlelo we-IP ikheli isabelo othomathikhi amakheli DNS-amaseva futhi ufake lonke nemingcele. Ngakho-ke, umsebenzisi emnyango TCP kwesigaba / IPv4 olandelwayo izakhiwo lingabe nezinombolo khona ungaziboni.
Uma ukulungiswa Lencwajana namanje enikeziwe, kodwa iseva ayiphenduli, ungafaka isicelo nezinye izilungiselelo. Ngokwesibonelo, ukusebenzisa iseva DNS-Google kungathunyelwa DNS ayethanda ukubhalisa 8888 (owodwa idijithi ngayinye Amasimu ezine) kanye nokusetshenziswa okunye 8844 lesifunda sakhona efanayo input. Ezimweni eziningi, kabusha kohlelo i-entry kokusebenza ipharamitha ayidingekile.
Qaphela: kwezinye izimo zidinga ukukhubaza ukusetshenziswa olandelwayo IPv6, kodwa ezimweni ezinjalo ezingajwayelekile kakhulu.
Ekugcineni, ungakwazi kabusha amasethingi eseva (ukuqalisa phansi, buyekeza wokumisa), okuyinto kuzodinga umugqa wemiyalo, ukusebenzisa egameni umlawuli, njalo linqume amaqembu amane (ngaphandle kophawu lwenkulumo):
ipconfig / ukukhululwa;
ipconfig / ukuvuselela.
Yini enye kungaba inkinga?
Lokho ngokuyisisekelo, eqinisweni, umangalela zonke ohlobene inkinga ukuthi iseva DNS ayiphenduli. Yini abangayenza ukuze balungise lesi simo, uma ngicabanga, kucacile. Njengoba ukuzobhekana namanye amacala kunokwenzeka ukwehluleka, esikhathini esiningi lokhu kungaba inkinga nge ukuxhumana nomphakathi, okuyinto umane sivaliwe ngoba abasebenzi ehhovisi. Ngezinye izikhathi kuvela izinkinga nge modems (ngokuvamile udinga nje iqalise). Ngokuvamile zivimba ukufinyelela efanayo Tracker sesifufula noma amasayithi nge okuqukethwe okusolwayo noma kungavunyelwa kwenzeka ezingeni amagciwane futhi izinhlelo zokuvikela (lapha kubalulekile ukuhlola kulungiselelwa). Ekugcineni, ungakwazi zingabahileli uhlelo Ukuvikelwa, ngisho ngokusebenzisa bakudala kakhulu i iseva elibambayo engaziwa ku-intanethi. Kungase kube elibiza kabusha ukufaka abashayeli Iseluleki Sokufaka Iphrinta Yenethiwekhi. Ngokuvamile, izinketho eziningi.
Yekuchumana kanjani ukususa ekulandiseni 'Skype "
Kanjani ukubona izithombe iCloud, futhi ukufinyelela kweminye idatha
Yekuchumana sendlela ukuthumela umlayezo "VC"
Indlela ukuxhuma amakhompyutha 2 ku-inthanethi: izindlela ezihlukahlukene yezobuchwepheshe
Amatshwayo e "Oxhumene": funda ukubeka ukumomotheka
Kangakanani ukutholakala port isheke
Klod Frollo, "Notre Dame": isithombe, izici kanye nencazelo
Potassium nitrate - eyingozi kodwa ewusizo chemical kwakwakhe
Inkampani yezindiza "Air Azuri": izibuyekezo, izilinganiso
Ugogo isipho ngoMashi 8. kuyisipho esivela ugogo wakhe umzukulu
Smartphone "Nokia Asha 503" - izibuyekezo, izincazelo, Ukucaciswa
Indoda Flawed - yilokhu?
Insipho Green siqaphe ubumsulwa
Uhlela emaphasishi esikoleni? Classics elingaphakathi akaphelelwa ukuthandwa
Indlela ukufaka isifanekiso Ucoz
Popular yemifino kwezitshalo zimila Japan - daikon. Ukulima futhi Ukunakekela
Multivarka "Polaris" - enemisebenzi ekhishini